Japan’s Parliamentary Vice-Minister for Foreign Affairs visits Maungtaw – Ministry of Foreign Affairs
A delegation led by Japan’s Parliamentary Vice-Minister for Foreign Affairs Mr. Iwao Horii, accompanied by Rakhine State Minister for Security and Border Affairs Col. Phone Tint and Rakhine State Government Secretary U Tin Maung Swe, arrived in Maungtaw town on March 24 afternoon and viewed the preparations being made for the redevelopment of the Maungtaw region to receive the returnees.
During his Maungtaw trip, Vice-Minister Mr. Iwao Horii said Japan will help in the resettlement processes and support both Myanmar and Bangladesh in assisting the returnees.
ဂျပန်နိုင်ငံလွှတ်တော်ရေးရာ နိုင်ငံခြားရေး ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဆောင်သောအဖွဲ့ မောင်တောဒေသပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် နေရပ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်လက်ခံရေး ဆောင်ရွက်ထားမှုအား ကြည့်ရှုလေ့လာ
ဂျပန်နိုင်ငံလွှတ်တော်ရေးရာ နိုင်ငံခြားရေး ဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Mr. Iwao HORII ဦးဆောင်သောအဖွဲ့သည် ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးဖုန်းတင့်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဦးတင်မောင်ဆွေတို့နှင့် အတူ ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် မောင်တောမြို့သို့ ရောက်ရှိကြပြီး မောင်တောဒေသ ပြန်လည် ထူထောင်ရေးနှင့် နေရပ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည် လက်ခံရေး ဆောင်ရွက်ထားမှုအား ကြည့်ရှု လေ့လာကြသည်။
ရှေးဦးစွာ ဂျပန်နိုင်ငံလွှတ်တော်ရေးရာ နိုင်ငံခြားရေးဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဆောင်သော အဖွဲ့သည် လှဖိုးခေါင်ယာယီလက်ခံရေးစခန်း သို့ရောက်ရှိကြပြီး ပြန်လည်လက်ခံမည့်သူများ ခေတ္တနေထိုင်နိုင်ရေးအတွက် အဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ပြီးစီးမှု၊ သောက်သုံးရေနှင့် လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး ဆောင်ရွက်ပေးထားမှုနှင့် ယင်လုံအိမ်သာများ တည်ဆောက်ပေးထားမှု အခြေအနေတို့ကို လှည့်လည်ကြည့်ရှုလေ့လာ သည်။
မောင်တောမြို့နယ်ရှိ လှဖိုးခေါင်ယာယီ လက်ခံရေးစခန်း တည်ဆောက်မှုမှာ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ပြီးစီးနေပြီဖြစ်သည်။ လက်ရှိ တွင် လူဦးရေ ၂၅ဝဝဝ ကျော် နေထိုင်ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်ပြီး အဆိုပါစခန်း တည်ဆောက်မှု ရာနှုန်းပြည့်ပြီးစီးပါက လူဦးရေ ၃ဝဝဝဝ ကျော် နေထိုင်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ စခန်း၌ ပြန်လည်လက်ခံမည့်သူများ တည်းခိုနေထိုင်ရေး၊ စားသောက်ရေး၊ သောက်သုံးရေ နှင့် လျှပ်စစ်မီးရရှိ ရေး၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပေးနိုင်ရေးတို့ အတွက် ကြိုတင်စီမံထားရှိကြောင်း သိရသည်။
ထို့နောက် ဒုတိယဝန်ကြီး Mr. Iwao HORII ဦးဆောင်သောအဖွဲ့သည် ရွှေဇားကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိကြပြီး ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများနှင့် တွေ့ဆုံကာ ကျေးရွာ၏ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု အခြေအနေနှင့် သိရှိလိုသည်များကို မေးမြန်းသည်။
ရွှေဇားကျေးရွာသည် အကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်များတွင် ပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိသော ကျေးရွာဖြစ်ပြီး လူမျိုးဘာသာမတူသည့်သူများ အေးချမ်းစွာစုပေါင်း နေထိုင်လျက်ရှိကာ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြကြောင်း သိရသည်။
ယင်းနောက် ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဆောင်သော အဖွဲ့သည် မောင်တောခရိုင် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနရုံးသို့ ရောက်ရှိကြပြီး တစ်ဖက်နိုင်ငံသို့ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းခံခဲ့ရသည့် ဟိန္ဒူဘာသာဝင် အမျိုးသမီးနှင့် တွေ့ဆုံကာ သိရှိလိုသည်များကို မေးမြန်းသည်။
ထို့နောက် ပန်းတောပြင်ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိကြပြီး နေအိမ်များ ပြန်လည်ဆောက်လုပ်ပေးထားမှု အခြေအနေကို ကြည့်ရှု လေ့လာကြသည်။
ဒုတိယဝန်ကြီးသည် ၎င်း၏ မောင်တော ခရီးစဉ်အတွင်း ဂျပန်နိုင်ငံအနေဖြင့် ပြန်လည် လက်ခံရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အကူအညီထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ် ကြောင်း၊ ပြန်လာမည့်သူများ လုံခြုံစိတ်ချစွာ နေထိုင်နိုင်ရေးအတွက် မြန်မာနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်ဖက်စလုံးတွင် ကူညီထောက်ပံ့သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။